Caynaba: Maayarkii Degmada oo dhuumaalaysi ku jira, xuska 18ka May oo aan la Hadal hayn iyo Saansaan Colaadeed oo ka uraysa Deegaanka! | Araweelo News Network (Archive) -
Caynaba: Maayarkii Degmada oo dhuumaalaysi ku jira, xuska 18ka May oo aan la Hadal hayn iyo Saansaan Colaadeed oo ka uraysa Deegaanka!
Caynaba(Arraweelo News)Kadib markii dhowaan koox dablay ahi ay weerartay xabsiga Magaalada Caynaba, taas oo sababtay inuu falka weerarkaa
ku dhinto Taliyihii sirdoonka gobolka Saraar Marxuum Axmed Caydiid, iyadoo dhaawac soo gaadhayTaliye ku xigeenkii xabsiga iyo Askar Boolis ah.
Dhacdadaa ayaa sababtay in magaalada Caynaba laga hayaamo oo gebi ahaanba la xidho goobihii ganacisiga iyo qaarka mid ah xarumaha Hay’addaha dawladda.
Wasiirka Arrimaha Guduha Somaliland Maxamed Nuur Carraale Duur ayaa weerarka lagu qaaday xabsiga Caynaba oo ay baxsadeen kooxdii falkaa fulisay, wuxuu Magaalada ku dalbaday Ciidanka RRU ee la dagaalanka argagixisada, kuwaas oo qabqabtay dad aan waxba galabsan oo aan ahayn kuwii falka lagu weeraray xabsiga fuliyay, balse wasiirku ku tilmaamay waqtigaa inay yihiin dadkii falka geystay oo ay gacanta ku dhigeen.
Hase yeeshee dadkaa oo ahaa kuwo isugu jira Odayaal, Cuqaal iyo ganacsatadii ugu waaweyneyd magaalada ayaa loo qaaday dhinaca Xabsiyada Mandheera iyo xabsiga weyn ee Hargeysa, kuwaas oo qaarkood xaaladooda caafimaad liidato. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah eheladoodu.
Xaalada ka taagan Magaalada Caynaba ayaa sababtay inay magaaladu noqoto meel bandow, iyadoo aanu jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi iyo xarakaad, isla markaana xiliggan oo uu dalka ka socdo diyaar garaw weyn oo loogu jiro Xuska Munaasibada 18 May aan laga hadal hayn sida uu sheegay Maayarka Caynaba oo wata Ilaalo xoogan, taas oo ay sababtay xaalada ka taagan deegaanka oo aanay weli xukuumaddu wax xal ah u helin.
Dhinaca kale xaalada iyo duruufaha cabsida laga qabo in ay arrintaasi deegaanka u horseedo colaad ayaa sababtay ayaa saamayn ku yeeshay gaadiidka Jaadka iyo kuwa kale ee sida badeecadaha oo si weyn u camari jiray Magalada Caynaba.
Sida uu ku sheegay warbixintaa Weriye Saleebaan Cilmi Siciid oo ku sugan Caynaba magaalada ayaa isu bedeshay cidla, isla markaana dadku ku yaryahay, iyadoo guud ahaanba inta badan goobihii ganacsigu ay xidhan yihiin. Sidoo kale waxa uu xusay in xafiiskii dowladda Hoose ka mid yahay goobaha xidhan. Kadib markii cabsi la xidhiidha xaalada ka taagan deegaanku soo waajahday Maayarka Caynaba.